Golaha wasiirada oo ansixiyay isbadelka maanta lagu sameeyay hogaanka ciidanka iyo gobolka Banaadir – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Golaha wasiirada oo ansixiyay isbadelka maanta lagu sameeyay hogaanka ciidanka iyo gobolka Banaadir
Kulan aan caadi aheyn oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirada ee xukuumada federaalka Soomaaliya ee uu shir guddoominayay ra’iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Xasan Cali Kheyre ayay ku ansixiyeen isbadal lagu sameeyey hogaanadda talisyadda ciidamada xooga dalka, booliiska, asluubta, nabad sugidda, iyo maamulka gobolka Banaadir.
Ugu horeyn kulanka golaha wasiirada ayaa warbixin looga dhageystay wasiirka amniga gudaha Mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo ka warbixiyay xaaladda amniga, isaga oo golaha u soo bandhigay qorsheyaal lagu sugayo amniga.
Sidoo kale, kulanka ayaa warbixin looga dhegeystay ra’iisul wasaare ku-xigeenka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo madax u ahaa guddiga xil wareejinta wasaaraddaha, waxaana uu xusay in inta badan wasaaraddaha ay si habsami leh ugu kala wareejiyeen, isaga oo u mahad-celiyay wasiiradii hore oo si quman u wareejiyay xilalka wasaaraddaha.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo golaha u soo bandhigay magacaabista taliyeyaal cusub oo ciidanka qalabka sida ay yeeshaan, waxaana dood iyo falan qeyn dheer kadib cod buuxda ku ansixiyeen golaha wasiiradu xubnahaan hoos ku xusan.
2. Taliyaha Hay’adda Nabad Sugidda C/laahi Maxamed Cali Sanbaloolshe
3. Taliyaha Ciidanka Booliiska Cabdixakiin Daahir Saciid (Saacid)
Ansixinta kadib, ayaa waxaa shirka golaha wasiirada kusoo biiray madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo, isaga oo uga mahad-celiyay isbdalada iyo dar-dargelinta howlaha Qaranka ee ay wadaan golaha xukuumadda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa xusay inuu kalsooni buuxda u hayo xubnahaan la magacaabay ee hoggaanka talisyada ciidanka, waxa uuna tilmaamay in wadanku wajahayo dagaal ka dhan ah kooxaha nabadiidka ah ee Al shabaab, musuq maasuqa iyo abaaraha.
“Dalku waxa uu ku jiraa xaalad dagaal, waxaana dooneynaa in hadda kadib, kooxaha nabadiidka aanaan sugin inta ay shacabka qarxinayaan oo ay dhibaateynayaan, waxaan rabnaa inaan annagu weerarno, goobaha ay joogaana ka sifeyno” Ayuu yiri madaxweynaha oo ka hadlayay kulanka golaha, waxa uuna shacabka ka codsaday inay garabsiiyaan ciidamada Qaranka.